Banyere Anyị - Pro-Lean Technology Co., Ltd.
Nkwado oku +86 15361465580
Nkwado e-mail enquires@proleantech.com
Ngwakọta igwe igwe & ntụgharị
Ọla mpempe akwụkwọ
Ngwá ọrụ mmepụta ihe
PROLEAN HUB bụ ihe aga-aga maka ụlọ ọrụ teknụzụ yana mmalite na-emepụta ngwaike ọhụrụ.Ọhụụ anyị bụ ịbụ onye na-eweta ihe ngwọta nke nrụpụta On-Demand.Iji nweta nke a, anyị na-agbasi mbọ ike ime ka nrụpụta dị mfe, ngwa ngwa, na-echekwa ọnụ ahịa site na prototyping na mmepụta.
Anyị na-atụgharị echiche gị ka ọ bụrụ ngwaahịa site na usoro anyị jisiri ike.
Ozugbo ị nwere echiche ọhụrụ,
ma ọ bụ ihe okike.
kpọtụrụ ndị injinia anyị.
Ị nweere onwe gị ịkpọtụrụ ndị injinia anyị awa 24 kwa ụbọchị.Ha ga-enyocha ngwa ngwa mgbagwoju anya nke ọrụ ahụ wee nye gị atụmatụ na nkwuputa okwu.
Mgbe ahụ, chere naanị izu ole na ole ma echiche gị ga-abụ eziokwu.
Anyị na-ejere ndị ahịa ozi n'ofe ụwa n'ụdị ọrụ dị iche iche, gụnyererobotik, ụgbọ ala, ikuku ikuku, na ngwa ahịa achịkọtara…
Site na ijikọta ọkachamara netwọk na ikike nrụpụta ụlọ, anyị nwere ike inye ndị ahịa anyị ohere ịnye ọnụ ahịa ngwa ngwa, oge atụmatụ oge, usoro mmepụta usoro na nyocha zuru oke.
Anyị nwere ike ịnye ndị ahịa nzaghachi nrụpụta ngwa ngwa ebe anyị na-achọpụtakwa ihe ngwọta kacha arụ ọrụ na ọnụ ahịa nke imepụta akụkụ ọ bụla.
Ọnụ ahịa ngwa ngwa
Oge echere echere
N'ichepụta otu nkwụsị
Usoro mmepụta anyị na-eme ka ndị ahịa nweta ngwọta zuru oke maka mkpa ọ bụla.Nke a gụnyere akụkụ dị mgbagwoju anya na nke ziri ezi, dị ka akụkụ anya, akụkụ ụgbọ ala, ngwaọrụ ahụike ma ọ bụ akụkụ ikuku.
Mgbe usoro nhota, anyị na-enye gị Asambodo ihe iji kwado ihe ziri ezi.A haziri usoro njikwa mma anyị iji nyochaa ọrụ ọ bụla, site na nhazi, site na mmepụta, na-enyefe ndị ahịa anyị n'oge.N'oge a na-enyocha ngwaahịa ma dị njikere maka nnyefe, a ga-agbaso akụkọ nyocha zuru oke.
Nwelite ọganihu oru ngo ozugbo
Ọrụ anyị bụ ngwa ngwa na usoro!Site na kọntaktị mbụ na anyị, na nnyefe nke akụkụ, anyị na-elekọta ọrụ ndị ahịa.Anyị na-emelite ndị ahịa na ọkwa mmepụta ihe, na-eji ụdị ntinye Project nke ezigara ndị ahịa kwa izu.ndị ahịa nwere ike ịhụ nke ọma ọnọdụ mmepụta nke ọrụ ha.
Gịnị kpatara PROLEAN HUB
- Ịchekwa ego site na usoro nrụpụta anyị chọrọ
- Mgbanwe dị mkpirikpi n'etiti asọmpi ahụ (yana ọnụego ọganiihu dị elu)
- Ịmepụta nhọrọ imewe na-agbanwe agbanwe maka ngwaahịa gị niile
- Na-enye gị nhọrọ zuru oke maka mmepụta akwa mmiri
Ọhụụ Prolean bụ ịghọ onye na-eweta ihe ngwọta nke nrụpụta On-Demand.
5 kacha nkịtị plastic injection moldi ...
Ụdị plastik 6 na-anwụ, ị maara ha ...
Ịkpụzi injection: Nyocha teknụzụ, A...
Isi ihe chepụta na ụzọ kachasị mma maka...
Na-emelite nhazi akụkụ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ...
Adreesị: Ụlọ A1, Fuhai Technology Industrial Park, Fuyong Community, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen
Sistemụ Nleba anya nke Project Prooess
Nwebiisinka © 2022 ProLean.Ikike niile echekwabara. Hot Products>
Ihe ndabere nke igwe Cnc Imepụta igwe Metal Steel Nrụpụta Ọrụ nkedo igwe Igwe nṅomi Nha n'ịkpụzi plastik
OKWU & OKWU